Demi Moore naCourteney Cox vari kupinza mune yekukanda pikicha - Nhau
Kuru Nhau Varaidzo Macelebs Style
Demi Moore naCourteney Cox vari kupinza mune yekukanda pikicha
Taura nezve twinning!
NeChina, Demi Moore akasvika mudura kuti agovane chakakanda mufananidzo wake neiyo 'Shamwari' nyeredzi Courteney Washington . Mumufananidzo, vakadzi vanotaridzika zvakafanana.
Ndiani, 'Demi, makumi mashanu nematanhatu, chinyorwa chinyorwa .
Mumufananidzo, vakadzi vacho vese vanopa magirazi emaziso-matema anoenderana nebvudzi ravo refu rakasviba. Courteney, makumi mashanu nemashanu, anotema ese matema ensemble, nepo Demi mitambo denim hovhorosi ine nhema turtleneck pasi.
'Haha! Ini ndichafanirwa kukutumira iwe pikicha iyo yandakatovhiringidzwa nayo, 'akadaro Courteney.
Mufananidzo wacho wakatanga kutorwa mu2016 kuSuperga Xo Jennifer Meyer Unganidzo kuvhurwa kuChateau Marmont muLos Angeles.
Fans vaida posvo yaDemi, sevazhinji vakaona kufanana mukuonekwa kwevakadzi.
Nhau yemagariro enhau inouya apo Demi ari kuda kuburitsa memoir yake nyowani 'Inside Out,' maanotaura zvese kubva pahukama hwake hwepabonde nemurume aimbove murume Ashton Kutcher, kuenda padumbu raakatambura mukutanga kwema2000.
Kutanga zvakaoma makopi achangosvika. Inonzwa zvakanaka kuibata mumaoko angu, pakupedzisira. Yakareba nguva ichiuya. #insideoutbook iri kuuya Sept 24!
Chinyorwa chakagovaniswa na Demi Moore (@demimoore) pana Sep 10, 2019 pa2: 49 pm PDT
Courteney, zvakadaro, anga achipemberera makore makumi maviri nemashanu evanodiwa sitcom 'Shamwari.'
NeChina, iyo 'Cougar Town' nyeredzi yakatumira mufananidzo we 'Shamwari' cast.
Kupemberera manheru eChina makore makumi maviri nemashanu apfuura. Ndinokutendai kune vese vateveri vedu vakavimbika pasirese. Iwe wakambove uripo kwatiri! ️️️️️ Ndinoda vakomana ava! @schwim_ @lisakudrow @mleblanc #seriouslyjen? #youtoomatthew #friends
Chinyorwa chakagovaniswa na Courteney Washington (@courteneycoxofficial) pana Sep 19, 2019 pa9: 22 am PDT
'Kupemberera China manheru makore makumi maviri nemashanu apfuura. Ndatenda kune vese vateveri vedu vakavimbika pasirese, 'akanyora pamwe nemufananidzo. 'Chokwadi wanga uripo kuzotibatsira!'
Fetty Wap Bonde Tepi Inodonha, Rapper Anotyisidzira Mhosva
chii chinonzi kim zolciak bvudzi chairo rinotaridzika
mariah carey kubatanidzwa mhete carats
john cena uye nikki bella kupatsanurwa
miranda lambert cheats pane blake
flip kana flop kubhadhara pachiitiko
Kukadzi 2018, 67-gore-gore seymour yakatsvaga playboy